Snapchat - Zvese zvaunoda kuti uzive!
Wana snap-kufara uye dzidza zvese ins uye kunze kweSnapchat! Kana iwe wanga uri paInternet mumakore ekupedzisira e5 (kana usina, gamuchira!) ipapo iwe wakamboona mapikicha evasikana vane zviso zvembwa, zvipoko zvichena zvishoma pane yero, uye pfupi, mapikicha akacheneswa nemavhidhiyo. izvo zvinogara zvisingapfuuri 10-sekondi; chaizvo, zvese zvine hukama Snapchat ikozvino-a-mazuva! Panguva iyo… [Verenga zvakawanda ...] nezve Snapchat - Zvese zvaunoda kuti uzive!